Israel နိုင်ငံ Bio-Vac Co., Ltd. မှထုတ်လုပ်၍ Pyae Thitsar Aung Company မှမြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းရောင်းချသော ကာကွယ်ဆေးများ။
VIR 121L ND ( K ) Vaccine
Spain နိုင်ငံ MEVET ကုမ္ပဏီမှ MPA Brand ဖြင့်ထုတ်လုပ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ Pyae Thitsar Aung ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းဖြန့်ချိနေသော တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ။
Vitamins, Aminoacids ဆေးအညွှန်း
အာဟာရလိုအပ်ချက် မညီမျှမှုကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသောဒဏ်များကို လျော့ကျစေပါသည်။
၅-၇ ရက် ဆက်တိုက် တိုက်ပေးရမည်။
ကာကွယ်ရန် - ရေ(၄) လီတာတွင် ဆေး (၂) စီစီနှုန်း
ကုသရန် - ရေ (၂) လီတာတွင် ဆေး (၁) စီစီနှုန်း
Biotin (Vit H), Selenium, Vitamin
ကြက်၊ ဘဲများနှင့် အခြားေသာ တိရစ္ဆာန်များ၊ အထူးသဖြင့် မွေးကင်းစ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကြက်ပေါက်၊ ဘဲပေါက် များတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော အူလမ်းကြောင်း နှင့်ဆိုင်သည့် Bactreia ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။။
ကြက်၊ ဘဲ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 80kg လျှင် ဆေး 10mg နှုန်း ဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ရန်။ (ဆေး 1g ကို 1Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲအကောင် ၈၀) သောက်ရေ 400 Liter လျှင် ဆေး 200 g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Improved and stablized egg production in leaves breeders
Less pullet eggs
Rapid onset of production and extended peak production.
Successful sutainance to heat and other stress.
Improved egg production in layers & breeders
Enhanced body weight in broiler & growers
Improved overall profits
Can be used safety in persence of birds
Non-toxic, non-irritant & non-corrosive
Econmical in use
Reduces in use
Effective replacement to skim milk powder
Complete removal of residual chlorine from water
No chocking and no bacterial silme formation
Blue-color to the bird's beak easy monitoring of vaccination
Powerful bactericide,vicucide & fungicide
Contain rust & corrosion inhibitors,penetrants
Non-toxic,non-irritant,safe & effective for usage in presence of birds
Proven efficacy particularoly during outbreak
Free from chlorime,phenol and aldehyde
User friendly & blodgradable
Optimizing the use the non convertional feed ingredients
Improving weight can gain in Broilers
Improve litter quality and dropping consistency
Improving feed conversion ratio (FCR)
Reduces levels of DCP incorporation in the feed substantially
Improves emulsification & digestion of fat
leads to better animal performance
Redices feed cost by givimg extra ME/Kg of Animal feed
Absorbs better fat soluble vitamins & amina acids
Leads to lower critical micelle concentratin
Egg shell quality and shelf life
Fertility and Hatchablity
Dress yield percentage,Skin & tissue strength
Competitive exclusion of entero pathogenic bacteria
Maintains Gut health for maximun feed utillzation & better digestion
Reduces colonisation of E.coli,Salmonella & Clostridium
ကြက်၊ ဘဲများနှင့် အခြားသော တိရစ္ဆာန်များ၊အထူးသဖြင့် မွေးကင်းစ တရစ္ဆာန်များ၊ ကြက်ပေါက်၊ ဘဲပေါက်များတွင် ဖြစ်ပွားတက်သော အူလမ်းကြောင်း နှင့်ဆိုင်သည့် Bacteria ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ဘဲ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 80 လျှင် ဆေး 10 mg နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ရန်။ (ဆေး 1g ကို 1 kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲအကောင်၈၀)
သောက်ရေ 400 Liter လျှင် ဆေး 200g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ရက် မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ - 250g ထုပ်
ကြက်၊ဘဲများတွင် Mycoplasm ကြောင့်ဖြစ်သော အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ နာတာရှည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
မွေးကင်းစတိရစ္ဆာန်များနှင့် ကြက်ပေါက်၊ ဘဲပေါက်များတွင် အူရောင်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊ကြက်ချေးဖြူရောဂါ စသည့်ဝမ်းရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
&nbspဝမ်းရောဂါနှင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါများ ရောထွေးဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ဘဲ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 1kg လျှင် ဆေး 20mg နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ရန်။(ဆေး 100g ကို1kg အလေးချိန်ရှိကြက်၊ဘဲအကောင် ၅၀၀ အား ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ရန်)(သို့မဟုတ်) သောက်ရေ 100Liter လျှင်ဆေး 100g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ကြက်ကလေးများနှင့် ကြက်ဆင်များတွင် Mycoplasma ကြောင့်ဖြစ်သော နာတာရှည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါများ၊ လေပြွန်ရောင် ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက် - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 10 kg လျှင်ဆေး 1gနှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။(ဆေး 1g ကို 1kg အလေးချိန်ရှိကြက်၊ဘဲ ၁ဝကောင်အား ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။)(သို့မဟုတ်)သောက်ရေ 200Liter လျှင် ဆေး 100g နှုန်းဖြင့်ဖျော်၍ ၃ရက်မှ ၅ရက်ဆက်တိုက်ပါ။
ကြက်များတွင် ဖြစ်ပွားတက်သော အူလမ်းကြောင်းများ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ရောင်းရမ်းခြင်းများ၊ Virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ ဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက် - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 25kg လျှင် ဆေး 1g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။(ဆေး 1g ကို 1kg အလေးချိန်ရှိကြက်၊ဘဲ ၂၅ကောင်)(သို့မဟုတ်)သောက်ရေ 500 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့်ဖျော်၍ ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Glucose,Vitamin K3,Vitamin C
ကျွဲ၊နွားများနှင့် ကြက်၊ဘဲများဖျားနားခြင်း၊နာတာရှည် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းရောဂါများ၊အားနည်းခြင်း၊အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်း၊ကပ်ပါးကောင်များ၊ရာသီဥတုဒဏ်နှင့်အခြားသောဒဏ်များအား ကာကွယ်ရန်၊ကုသရန်။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသော ကူးစက်လွယ်ရောဂါပိုးများဒဏ်ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ခုခံနိုင်စွမ်း မြင့်တက်စေရန်။
&nbspရောင်ရမ်းခြင်း၊သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ယားယံခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
&nbspမျိူးအောင်နှုန်းမြင့်မားစေခြင်း၊ ပေါက်နှုန်းကောင်းခြင်းနှင့် ဥခွံအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေခြင်း။
သောက်ရေ 50Liter လျှင် ဆေး 100g နှုန်းဖြင့် ၅ရက် မှ ရရက်ဆက်တိုက်ပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ - 500g ထုပ်
Vitamin A,Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin K3,Vitamin C,Vitamin B1,Vitamin B2,Pantothenic Acid Vitamin B6,Vitamin B12,Nicotinamide,Sodium Chloride Potassium Chloride
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသော ဖိစီးမှုဒဏ်များ၊ ရောဂါဒဏ်များခံစားရသည့်အတွက် အာဟာရဓာတ်များ ချိူ့တဲ့နေချိန်တွင် သုံးရန်။
ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုလွန်ကဲခြင်း (ဥပမာ-ဝမ်းလျှော့ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊အန်ခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်း)ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သုံးရန်။
&nbspကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ရရှိသော ဖိစီးမှုဒဏ်များကို ကာကွယ်ရန်။
ကြက်၊ဘဲ - သောက်ရေ 100Liter လျှင် ဆေး 100g နှုန်းဖြင့် ၃ရက် မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ အခြားတိရစ္ဆာန်များ - သောက်ရေ 100Liter လျှင်ဆေး 50-100g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Sodium Hydrocarbonate,Sodium Chloride,Potassium Chloride
ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှု လွန်ကဲခြင်း(ဥပမာ-ဝမ်းလျှောခြင်း၊ချွေးထွက်များခြင်း၊အန်ခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်း)များ ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သုံးရန်။
&nbspကြီးထွားနှုန်း ရပ်တန့်ခြင်း၊အာဟာရဓာတ် မညီမျှခြင်း၊အရိုးပျော့ခြင်း၊ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊Protein ချိူ့တဲ့မှုကြောင့် အချင်းချင်းဆိတ်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်။
&nbspရာသီဥတုပြောင်းလဲသည့်အချိန်၊ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့် အချိန်တွင် ခံစားရသောဒဏ်ရာများကို ကာကွယ်ရန်။
ကြက်-သောက်ရေ 200Liter လျှင် ဆေး 100g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
နွား၊သိုး၊ဆိတ်၊မြင်း-သောက်ရေ 10Liter လျှင် ဆေး 100g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Oxytetracycline,Vitamin A,Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin K3,Vitamin B2,Vitamin B12 Calci d-pantothenate
မျိူးဥများနှင့် စားဥထုတ််သော ကြက်၊ဘဲများတွင် အဓိကသုံးသည်။
&nbspဥနှုန်းတိုးလာစေခြင်း၊ ဥ အရွယ်အစားကြီး၍ ဥခွံအရောင်လှပခြင်း၊ဥသက်တမ်းရှည်ခြင်း၊မျိူးအောင်နှုန်းမြင့်ခြင်း၊ပေါက်နှုန်းမြန်ခြင်း။
&nbspရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသောဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
&nbspထုတ်လုပ်မှု မထိခိုက်ဘဲ အစားစားနှုန်းကို ထိန်းချူပ်နိုင်ခြင်း။
&nbspကြက်၊ ဘဲ၊ဘဲငန်းများကို ဥနှုန်းမြင့်မားစေရန် အကောင်းဆုံးဆေး။
ကြက် - သောက်ရေ 100Liter လျှင်ဆေး 100g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 500kg လျှင် ဆေးပမာဏ 100g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ဖျားနာနေချိန်နှင့် ဖိစီးဒဏ်များ ခံစားနေရချိန်တွင် - သောက်ရေ 100Liter လျှင် ဆေးပမာဏ 100g နှုန်းဖြင့် ၅ရက်မှ ရရက် ဆက်တိုက်ပါ။(သို့မဟုတ်)ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 300kg လျှင် ဆေးပမာဏ 100g နှုန်းဖြင့် ၅ရက်မှ ရရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Vitamin A,Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin B1,Vitamin B2,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B12,Vitamin PP,L-Lysine,Dl-Methionine,Cholin,Sorbitol
အစာထဲတွင် အာဟာရဓာတ် မညီမျှခြင်း၊ခြံအတွင်း အလင်းရောင်ဝင်နှုန်း ညံ့ဖျင်းခြင်း၊လေဝင်လေထွက် ညံ့ဖျင်းခြင်းကို မြှင့်တင်ရန်။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် ရောဂာပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်းဒဏ်မှ ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ဘဲ၊နွားငယ်လေး၊နို့စားနွား၊သိုး၊ဆိတ်၊မြင်းများ မီးလွတ်ချိန်၊သားခွဲချိန်တွင် အရွယ်ညီမျှမှုရှိစေခြင်း၊အစာချေဖျက်နှုန်းကောင်းစေခြင်း၊အမွေးပေါက်နှုန်းကောင်း၍ အမွေးအရောင် လှပစေခြင်းများကို မြှင်တင်ပေးရန်။
ပဋိဇီးဝဆေးများ၊ ကာကွယ်ဆေးများ တိုက်ပြီးချိန်တွင် တိုက်ကျွေးရန်။
ကြက်-သောက်ရေ 200liter လျှင် ဆေး 50-100 mlနှုန်းဖြင့် ၄ရက်မှ ၈ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
နွား၊သိုး၊ဆိတ်၊မြင်း-သောက်ရေ 100Liter လျှင် ဆေး 100ml နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။သောက်ရေထဲတွင် ဖျော်ထားသောဆေးကို ၁၂နာရီအတွင်းတွင် ကုန်အောင်တိုက်ရန်။
ထုပ်ပိုးပုံ - 1Liter ဘူး
Povidone Iodine,Solvent,Glycerin q.s.f
တိရစ္ဆာန်များ၏ ခြံတွင် ရေ 100-250Liter လျှင် ဆေး 1Liter နှုန်းဖြင့် ကြမ်းခင်း၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ခြံပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ် ၂ပတ်၊၃ပတ် ဆက်တိုက်ဖျန်းရန်။
Mycoplasma နှင့် E-coli ကြောင့်ဖြစ်သော Bateria ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ရောထွေးဖြစ်ပွားချိန်တွင် ကာကွယ်ရန်၊ကုသရန်။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 10kg ရှိတိုင်း ဆေး 1ml နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။(သို့မဟုတ်) သောက်ရေ2Liter လျှင် ဆေး 1ml နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Colibacillosis (သို့) Salmonellosis ရောဂာများကို ကုသရန် ၅ရက်မှ ရရက် ဆက်တိုက်ပါ။ လိုအပ်ပါက ဆေးတိုက်ပြီး ၅ရက်အကြာတွင် ထပ်မံတိုက်ရန်။
ကျွဲ၊နွား၊မြင်း-အူလမ်းကြောင်းရှိ သံလုံးကောင်များ၊အဆုတ်သံကောင်များ၊မျက်လုံးသန်ကောင်၊အရေပြာရှိ ကပ်ပါးကောင်များ၊ဝဲရောဂါများတွင် သုံးရန်။
ဝက်-အူလမ်းကြောင်းရှိ သံကောင်များ၊အဆုတ်သံကောင်များ၊အရေပြားရှိ ဝဲရောဂါများတွင် သုံးရန်။
အရေပြာအောက်သို့ ထိုးရန် (S/C)
နွား၊မြင်း-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 50kg ရှိတိုင်း ဆေး 1ml နှုန်း။
ဝက်-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 33kg ရှိတိုင်း ဆေး 1ml နှုန်း။
သိုး၊ဆိတ်-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 25kg ရှိတိုင်း ဆေး 0.5ml နှုန်း။
ခွေး၊ကြောင်-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 20kg ရှိတိုင်း ဆေး 0.5ml နှုန်း။
ထုပ်ပိုးပုံ - 50ml ပုလင်း
ORT,Mycoplasma spp,(CRD),Pasteurella multocida,Haemophilus spp,(Coryza),Salmonella s.p.(Typhus avium)Clostridium spp.အစရှိသည့် Bacteria များကြောင့်ဖြစ်သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 1kg ရှိတိုင်း ဆေး 10mg နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။(သောက်ရေ 5Liter လျှင် ဆေး 1ml နှုန်းဖြင့်)၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ကြက်ကလေးအုပ်စုများတွင် Mycoplasma Gllisepticum ကြောင့် ဖြစ်သော နာတာရှည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 16kg လျှင် ဆေး 1ml နှုန်းဖြင့် ၅ရက်ဆက်တိုက်ပါ။(ဆေး 1ml လျှင် 1kg အလေးချိန်ရှိ ကြက် ၁၆ကောင်အား တိုက်ကျွေးရန်။)
Hydrosoluble complementary feed in oral solution
Magnesium sulphate heptahydrate 14.86%
Propylene glycol 2.28%
Sorbitol (E 420) 200.00 g
Betaine Hydrochloride (3a925) 50.00 g
L-Carnitine (3a910) 25.00 g
Artichoke extract 1.00 g
Sorbitol သည် ဝမ်းပျော့စေပြီး အစာချေဖျက်မှုအားကောင်းသဖြင့် Weight gain ရရှိရေးကို အထောက်အကူပြုသည်။
Betaine Hydrochloride သည် Acidifier အဖြစ် အသုံးဝင်သဖြင့် အစာချေဖျက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကြီးထွားနှုန်းကို တိုးတက်မြင့်မားစေပါသည်။
Potassium သည် ဓာတ်နည်းခြင်း၊အဆုတ်လမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်း၊အသည်းစွမ်းအားနည်းခြင်း၊သွေးအားနည်းခြင်းတို့အတွက်လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ထို့ကြောင့် Weight gain ကောင်းမွန်ခြင်း၊ကြက်ဥနှုန်းမြင့်မားစေခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတို့အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အလွန်ကောင်မွန်သော ဆေးဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သောကြောင့် မည်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိုမှ ပူပန်ရန်မလိုပါ။
L-Carnitine သည် ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် တိုးမြှင့်ပေးသည်။ထို့အပြင် ရေသန့်ရှင်းမှု မရှိခြင်းနှင့် အစာ၏ ချိူ့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်များအတွက် သောက်ရေ ၁၀၀၀ လီတာတွင် ဆေး ၁-၂ လီတာနှုန်းဖြင့် ၅ရက်ဆက်တိုက်ရန်။
ထုပ်ပိုးပုံ - 1,5 and 25 Liters
စပိန်နိုင်ငံ MPA ဆေးကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ပြီး အရည်အသွေး အာမခံပါသည်။